SM-A207F/DS | SM-A207FZGGMYM | MYANMAR MM
Triple Camera & Smarter Selfie Experience Bigger Screen Better Performance
*Images simulated for illustrative purposes.**Infinity-V Display:anear bezel-less, full-frontal glass, edge-to-edge screen.***Screen measured diagonally asafull rectangle without accounting for the rounded corners. The screen size is 6.5" in the full rectangle and 6.4" with accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners and camera hole.
Available Memory (GB)* 49.8
*အရွယ်အစား -အရွယ်အစားနဲ့ အလေးချိန်သည် ထုတ်ကုန်၏ဖွဲ့စည်းပုံ အရပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
*မြင်ကွင်း အရွယ်အစား - ထောင့်ဖြတ်၍ တိုင်းတာပါသည်၊ Galaxy A20s ၏ဖန်သားပြင် (စခရင်) အရွယ်အစားမှာ စတုဂံပုံအပြည့်၌ 6.5" ရှိ၍ ထောင့်ဝိုင်းများပါ ထည့်တွက်ပါက 6.4" ရှိသည်။ ထောင့်ဝိုင်းများနှင့် ကင်မရာ အပေါက်တို့ကြောင့် အမှန်တကယ် မြင်ရသည့် ဧရိယာမှာ ပိုသေးပါသည်။
*ဘက်ထရီ စွမ်းအား (ပုံမှန်အတိုင်း) - ပုံမှန် တန်ဖိုးကို တတိယပါတီ ဓါတ်ခွဲခန်း အခြေအနေအတိုင်း စမ်းသပ်ထားပါသည်။ ပုံမှန် တန်ဖိုးသည် ဘက်ထရီ စွမ်းအား၌ သွေဖယ်မှုကိုထည့်တွက်ထားသော ခန့်မှန်းခြေ ပျမ်းမျှ တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး IEC 61960 စံနှုန်းနှင့်အညီ စမ်းသပ်ထားသော ဘက်ထရီ နမူများဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်နှုန်း (အနည်းဆုံး) စွမ်းအားမှာ 4000mAh ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ - အမှန်တကယ် ဘက်ထရီ သက်တမ်းသည် ကွန်ရက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဖီချာများနှင့် အသုံးပြုသော အက်ပ်များ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် မက်ဆေ့ပေးပို့မှု အကြိမ်ရေ၊ အားသွင်းသည့် အကြိမ်ရေ နှင့် အခြားအချက်အလက်များအလိုက် ကွဲပြားပါသည်။